Hababka Madadaalada ee Wiilasha | Niman qurux badan
Timaha madadaalada ee wiilasha
Kuwa yaryar waxay leeyihiin gacan bilaash ah si ay u noqdaan kuwo asal ah oo madadaalo leh. Taariikhaha iyo ciidaha gaarka ah, wiilasha iyo gabdhuhu waxay soo saari karaan sida ugu wanaagsan ee soo jiidashada dib u samee timo madadaalo leh. Marka laga hadlayo carruurta, fikradahooda waa la kicin karaa, laakiin cabbirada gudaheeda, waan ognahay taas timahooda aad bay u xaddidan yihiin dhererkeeda awgeed, inkasta oo aynaan meesha ka saarin in fikraduhu ay noqon karaan kuwo aan la qiyaasi karin.
Timaha waalan ayaa mudan in la abuuro fikradaha la ururiyeyna waxaan ka dhigi karnaa caruurteena inay qaadaan timaha qosolka leh. Iyadoo ku xiran mawduuca la matali doono, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah fikradaha oo waxaad samayn kartaa wax ka beddel yar.
Gabdhaha timaha dheer waxay leeyihiin fursad weyn dib u samee timo cajiib ah oo sidaas awgeed timaha u qaabeeya tidcado ama qaabab aan la qiyaasi karin. Carruurta haddii ay timo dhaadheer leeyihiin sidoo kale way samayn karaan ama waxay ku dari karaan meelaha la xiiray. Haddii aysan faa'iidadan helin waxay mar walba isticmaali karaan male-awaalkooda timaha iyo kala qaybsanaanta midabada.
1 Qaabka timaha ee leh mawduuca alaabta aad ku ciyaarto
2 Qaabka timaha ee geesiga aad ugu jeceshahay
3 Madax leh qaabab xayawaan
4 Timaha mawduuca ah ee Monster
5 Timo-jarida iyo timo-jarida oo leh sawirro la xiiray
Qaabka timaha ee leh mawduuca alaabta aad ku ciyaarto
Haddii soo jeedintu ay tahay in la sameeyo timo leh mawduuca alaabta ay jecel yihiin, hubaal carruurtu way ku farxi doonaan. Isagu timihiisa ayuu ku midabayn doonaa midabyo madadaalo iyo qurux badan, doorashada cod awood u leh aad u ciyaarto toyga. Buufin gaar ah oo timaha lagu buufiyo ayaa la isticmaali doonaa oo aan waxyeeleynin qaabka jilicsan ee maqaarka carruurta.
Kadibna waxaan isku dayi doonaa inaan ku dhejino toyga timaha leh nooc ka mid ah xeeladaha. Way awoodaan Ku dheji biinanka timaha silikoon ee alaabta ay ku ciyaaraan ka dibna dhig dhammaan set oo ku dhejinaya timaha. Maxay yihiin alaabta lagu ciyaaro ee jecel? Mawduucyada inta badan la xusho waa baabuurta, cagafyada, playmobil, lego, dinosaurs ... ama kartoon kasta oo caan ah.
Qaabka timaha ee geesiga aad ugu jeceshahay
Dhammaan carruurta waxay leeyihiin geesi sare, hooyooyinkuna way jecel yihiin ku raaxayso jilayaashaaga. Waxaa jira fikradda ah in la xidho Spiderman madaxa, helitaanka sawir yar oo ku dheji dusha sare ama gees ka mid ah timaha. Waxa kale oo aad dhigi kartaa agagaarka timaha nooc ka mid ah xuubcaaro kaas oo laga heli karo bacad kasta oo ku saabsan mawduuca Halloween. Waxay u ekaan doontaa mid aad u fiican sida Spiderman uu u muuqan doono inuu timahaaga ku dhex simbiriirixo shabakadeeda caarada.
Mawduuc kale oo aad isticmaali karto waa inaad meel dhigto qaar jilayaasha dagaalka xiddigaha oo leh nalalkooda iyo timaha korkooda. Waa in taxaddar la sameeyaa si jilayaasha si fiican loogu dhejiyo si aysan u dhaqaaqin, iyadoo la kaashanayo timo-timo wanaagsan oo ku xiran caruusadaha leh silikoon. Inta kale ee timaha waxaan ku rinjin doonaa rinji timo gaar ah, Xaaladdan oo kale midab madow iyo caddaan ah ayaa la isticmaalay.
Madax leh qaabab xayawaan
Timahani waa kuwo asal ah. Timaha qaabka darafyada leh ayaa la isticmaalay awood u leh in ay ku ekaato qaabkeeda oo leh metelaad xayawaannada qaarkood. Waxaan arki karnaa sida loo sawiray qaabka dachshund iyo midabka timaha dabiiciga ah ee ilmaha waa laga tagay. Ka dib markaad dhigto qaabka madaxa eyga adoo isticmaalaya maro yar oo la dareemo oo aad ku xajiso booskeeda silig.
Sidoo kale waa la rinjiyeeyay qolof leh midabyo badan, oo ka dhigan midabyo badan oo uu chameleon qaadan karo kana faa'iidaysan karo midabka cagaarka ah ee xayawaankan. Qaabka madaxa iyo jirka ayaa lagu qaatay jel xoog badan oo dheeraad ah lugaheedana dhinacyada ayaa lagu sawiray.
Timaha mawduuca ah ee Monster
Timahan waa la koobiyn karaa maalmo waalan oo argagax leh ama Halloween-ga caanka ah. Hal fikrad oo aan la isticmaalin wax dheeh ah ayaa ah inaad iibsato farabadan indhaha caag ah oo ku dheji timaha oo dhan. Fikrad kale oo fudud oo asal ah ayaa ah in la dhigo tuubooyinka nadiifka ah ee timaha. Isha ayaa la dhigayaa mid ka mid ah cidhifyada waxaanan ku dhejin doonaa dabo badan timaha. Inta soo hartay timaha waxay awood u yeelan doonaan inay u socdaan si waafaqsan iyadoo la ciribtiri doono dhamaadka.
Iyada oo la buufin cagaaran Waxaan sidoo kale samayn karnaa mawduucyo madadaalo leh, sida wejiga shisheeye ama dhejinta sawirada caarada ama cayayaan kasta oo ku dheggan sariirta cawska ee timaha.
Timo-jarida iyo timo-jarida oo leh sawirro la xiiray
Hababkani aad bay u fudud yihiin, laakiin sida asalka ah oo xiiso leh. Qaabkeedu wuxuu ina siinayaa fikradda samaynta hoos loo dhigay, la socota dhinacyada madaxa oo si fiican loo xiiray iyo timo aad u dheer oo korka ah. Dhererka 0,5 cm ayaa looga tagi doonaa dhinacyada ka dibna iyada oo la isticmaalayo mandiilo gaar ah ayaa la samayn doonaa mid kale oo lagu xiiray qaababka aad rabto. Dhinaca sawirada waa la sawiray hillaac iyo fiidmeerta Batman. Inta soo hartay timaha waxaa lagu dayn doonaa kuwa la gooyay ama tiirar ayaa la samayn doonaa.
Kuwani waa qaar badan oo ka mid ah fikradaha maalmaha muhiimka ah, xafladaha iyo madadaalo badan. Carruurta waxay noqon doontaa madaxa ku abuura sixir waxaana hubnaa in qaar badan oo iyaga ka mid ahi ay madaxooda u soo bandhigi doonaan hab baxay. Ha iloobin inaad ku buuxiso dharka timahan waalan, adoo isticmaalaya jel timaha, midabada macmalka ah iyo tirooyinka toy.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Timaha madadaalada ee wiilasha